News | vegetables
News | Tag: vegetables
' काम गरेर खान के को लाज ?'
देवघाट । एक वर्षअघिसम्म रक्सी बनाएर नारायणगढ बजारमा बिक्री गर्न जानु र फर्कंदा त्यही पैसाले तरकारी, नून, तेल गर्ने गरेकी तनहुँ देवघाटकी जौमाया रानामगरको दैनिकी अहिले फेरिएको छ । अब उनलाई रक्सी बेच्न नारायणगढ जानु पर्दैन, बरु त्यहाँका मानिस उनको घरमा तरकारी किन्न आउने गर्दछन् । उनको बारीमा करेला, घिरौंला, चिचिण्डो, लौकालगायतका तरकारी लटरम्म देख्न सकिन्छ ।
गर्मीमा यी ६ तरकारी खाँदा फाइदै फाइदा
गर्मी मौषममा खानपान नमिल्दा स्वास्थ्मा समस्या आइहाल्छ । जाडो मौसमको तुलनामा गर्मीमा पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ । यस्तो जे मन लाग्यो त्यो खाना खानु हुँदैन । विशेष गरेर तारेको या मसालायुक्त खाना खाँदा फुड प्वाइजनको समस्या हुन सक्छ । यस्तो समयमा यी खानेकुराहरुमा पो बल गर्ने की !
किन खाने रायोको साग ? यस्तो छ फाइदा
रायोको सागमा भिटामिन–के प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । भिटामिन केले हड्डीलाई आवश्यक पर्ने खनिज प्रदान गर्छ । साथै, यसले रगत जम्ने र अनावश्यक ठाउँमा क्याल्सियम जम्मा हुने क्रम पनि रोक्छ ।
बर्खा र बिचौलियाको कारण तरकारीको भाउ ४ गुणासम्म बढ्यो
काठमाडौं । बर्खा, बिचौलिया र भारतबाट कम आयात भएपछि तरकारी भाउ अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार एक महिनाको अवधिमा थोकमै चार गुणासम्म भाउ बढेको छ । समितिका अनुसार भारतबाट भित्रिएको तरकारी तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुन्छ।
तापक्रम र वर्षा घटबढ हुँदा तरकारीमा ढुसीको असर
ललितपुर । तापक्रम र वर्षा घटबढ हुँदा तरकारीमा ढुसीजन्य रोगले असर गरेको पाइएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको बाली रोग विज्ञान महाशाखाले गरेको अध्ययनले तरकारीखेतीमा वर्षा र तापक्रम दुवै ठिक्क मात्रामा नहुँदा ढुसीजन्य रोगले आक्रमण गरेको भेटिएकोे हो ।
काठमाडौं । बजारमा भित्रिने तरकारीमा छ्यापछ्याप्ती विषादीको प्रयोग हुने गरेको भेटिएको छ। बाली संरक्षण निर्देशनालयले सबै तरकारी र फलफूलमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म विषादीको मात्रा प्रयोग हुने गरेको बताएको छ।